Pipedrive: Nzipụta n'ime Ahịa Pipeline gị | Martech Zone
Pipedrive: Nzipụta n'ime Ahịa Pipeline gị
Tọzdee, Ọktoba 20, 2016 Tọzdee, Ọktoba 20, 2016 Douglas Karr
Azụmaahịa anyị dịtụ iche na anyị bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na-arụ ọrụ yana ndị ahịa ole na ole. Agbanyeghị, iji akwụkwọ a yana ọnụnọ mmekọrịta anyị na -emepụta ọtụtụ ndu. Ọtụtụ ndu, n’ezie, na anyị anaghị enwe oge na ihe eji enyocha ma wepụta nke ọ bụla n’ime ndị ahụ iji chọpụta nke ahụ zuru oke maka azụmaahịa anyị. Anyị maara na anyị atụfuru ụfọdụ nnukwu ohere.
Ọzọkwa, anyị enweghị akụ iji zụlite ndu anyị. Ruo ugbu a. Anyị amalitela Pipedrive na nkwenye nke ụfọdụ ndị ahịa anyị na ndị mmekọ iji nyere anyị aka ịgbaso, itinye aka, ma rụọ ọrụ site na listi olile anya anyị nke ọma. Oge eruola na anyị ga-ahazi, na Na-agba ọsọ bụ azịza zuru oke maka obere azụmaahịa anyị.
Atụmatụ Pipedrive Gụnyere:
Njikwa Ọdụ mmiri - nyocha ọhụụ doro anya nke na-akpali gị ime ihe, nọgide na-ahazi ma na-achịkwa usoro ahịa ahịa dị mgbagwoju anya.
Ọrụ na Mgbaru Ọsọ --Hụ ihe omume ndị otu gị ma ọ bụ karịa. Gbakwunye ihe omume na-emekọ ma hụ ndepụta ịme ihe gị n'otu ibe na-arụ ọrụ na kalenda Google.
Nkwupụta Ahịa - tebụl na eserese mara mma nke na-enyere gị aka ịghọta nke ọma otu ndị otu gị na-eme.
Ntinye Email - BCC ma ọ bụ jikọọ jikọọ onye na-eweta email nke ịhọrọ ebe ị nwere ike izipu ozi ịntanetị kpọmkwem site na Pipedrive.
Saleskọ ahịa ahịa - lelee azụmahịa ndị na-aga n'ihu mere ndokwa site na ụbọchị mmechi ha na-esote azụmahịa ndị ị mechibidoro maka nyocha dị mfe.
Mbubata data na Mbupu - Bubata site na Base CRM, Akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Capsule CRM, Close.io, Highrise, Maximizer, NetSuite CRM, Nimble, Nutshell, PipelineDeals, Redtail CRM, Sage ACT !, Salesforce, Saleslogix, SugarCRM, na Zoho CRM.
Mobile Apps - A gam akporo na iOS Mobile ngwa webatara ikike ịgbakwunye nzukọ, lee ndetu oku, mee nhọpụta, yana kpọọ nsochi nsuso site na ngwa ngwa Pipedrive
Bido Ọnwụnwa Pipedrive Gị Taa!
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ anyị gwa-a-Enyi site na Pipedrive na post a. Anyị na-enweta a 4 izu ndọtị ma ọ bụrụ na folks debanye aha.
Tags: Ntọala CRMAkwụkwọ mpempe akwụkwọCapsule CRMMechiekalenda googleIsi mmaliteMaximizerNetSuite CRMNimbleAfọNa-agba ọsọpipelinePipelineDealsRedtail CRMSage omume!pipeline ahịandị ahịaAhịaSugarCRMZoho CRM
Ebee ka ndị na-ere ahịa na-emefu Dollar Mgbasa Ozi Ha?
Ọkt 27, 2016 na 9:25 AM
Hmm, ụfọdụ azụmaahịa B2B na - eme ka ị daa ịhụnanya maka ngwongwo ha, ọ bụghị ya? Enwere m obi ụtọ mgbe ngwanrọ na nyiwe dịka Pipedrive na-emepe n'ihi na ndị a gimmicks na-eduga n'ọganihu azụmaahịa na uto azụmaahịa na-eduga n'ọrụ ọrụ! Edere ọmarịcha, dị ka mgbe niile, Douglas! Kudos!
Dee 14, 2017 na 3: 14 AM
Enwere n'ezie njikwa pipeline zuru oke CRM nke ka mma karịa Pipedrive IMHO - Bitrix24. SuiteCRM nwekwaara onwe ya ma dịkwa mma, mana Bitrix24 dị n'elu ndepụta m n'ihi na ha nwere akpaaka na ahịa email.